SP-G10 180ml Rubber Wood Glass Ultrasonic Aromatherapy dị mkpa mmanụ Diffuser, China SP-G10 180ml Rubber Wood Glass Ultrasonic Aromatherapy dị mkpa mmanụ Diffuser Manufacturers, Suppliers, Factory - Sunpai Industries Limited
Tụkwasịnụ Ikike: Nri 50000 kwa ọnwa
Igwe eji eme ihe emechara emechi emechi emepe emepe emepe emepe emepe 180M
1.Real Bamboo Finish na Sleek Design: N’inwe ọmarịcha na anya dị mma, a na-eji akwa bamboo dị elu ma jiri mkpuchi mkpuchi dị larịị kpuchie ya.
Mkpuchi Glass 2.Hand: Ejiri akwa nke pụrụ iche na iko pụrụ iche. A bịa na mgbasa ozi mmanụ dị anyị mkpa, anyị na-akwụ ụgwọ maka iji ihe ọzọ mana klaasị klas dị elu, ihe nchekwa, na gburugburu ebe obibi, yana usoro mmepụta nke steeti na njikwa njikwa siri ike.
3.Warm Yellow Quiet Nightlight: Nke a ultrasonic diffuser -eme a izuike & ihunanya ambience gị. Tinye ya n’ime ụlọ gị ma ọ bụ nke nwa gị ma were ya dị ka ìhè abalị maka ụra na-ehi ụra.
4.The Onyinye Ekeresimesi Ego: Nke a iko aromatherapy diffuser nwere ihe pụrụ iche, nke na-ewetara ndị ikwu na ndị enyi gị ihe ịtụnanya, mee ka ha zuru ike ma nwee ọ theụ ọgwụgwọ ọgwụgwọ aromatherapy na mmanụ dị mkpa.
5. Gbanyụọ Nchekwa Na-enweghị Mmiri: Ọ ga-apụ na akpaghị aka mgbe achọpụtara na ọ nweghị mmiri. Echegbula onwe gị banyere ịmebi onwe gị ma ọ bụ igwe onwe ya.
ihe onwunwe Iko + Bamboo + PP
ìhè Ọcha Yellow Brighter / Weaker / Na-eku ume
Oge Ikpeazụ 6-9hours
Nhazi %127 * 138mm
unit ibu 760g
Ogo igbe agba 157 * 157 * 187mm
Oke kaadionye 49 * 33 * 39CM
NW / katọn 9.2g
GW / katọn 9.8kgs
SP-G76 120ml Aromatherapy Mkpa Mpempe Ejiri Mmanụ Ejiri Mkpa Efere Mkpa Efere